Home Wararka Dowladda Eriteriya oo ku eedeysay Qatar in ay abaabuleyso falal argagixiso gudaha...
Dowladda Eriteriya oo ku eedeysay Qatar in ay abaabuleyso falal argagixiso gudaha dalkeeda
Dowladda Ereteriya aya soo saartay warsaxaafadeed iyo bayaan ay ku muujisay inay Qatar ka maleegeyso dalkeeda qorshe qaawan oo ay Qatar u adeegsaneyso ururo argagixiso si loo abaabulo falal argagixiso oo lagu qalqal gelinayo shacabka iyo dowladda Eriteriya. (Halka ka akhriso eedeymaha dowladda Eriteriya)
Dowladda Eriteriya aya ku eedeyneysa dalka Qatar in ka dhigto dalkeeda sida Soomaaliya si loo waayo dowladnimo si Qatar ay u fushato danaheeda gaarka ah iyadoo qorsheyneysa in Eriteriya ay noqoto sida Soomaaliya.
Eedeymaha loo soo jeediyay Qatar oo toban ah ayaa waxaa ay u qoran yihiin sida hoose.
1. In dib loo abaabulo hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee mucaaradka Ereteriya; in la mideeyo ururadooda isla markaana taageero dheeri ah u fidiso;
2. In si gaar ah diiradda loo saaro dhalinyarada reer Eritrea; mideeyaan ururadooda kuna dhiirigeli inay ku kacaan ficillo fallaago ah oo ka dhan ah dawladda Ereteriya;
3. In la abuuro xagjirnimada diineed ee kooxaha Islaamiyiinta mucaaradka ah ee Ereteriya isla markaana ay ku kiciyaan kacdoonka muslimiinta Ereteriya inay ka soo horjeedaan walaalahooda;
4- In lagu beero abuurka xoqida qowmiyadeed iyo nacaybka ka dhex jira dadka reer Eritrea;
5. In la bilaabo dadaallo lagu kicinayo mudaaharaadyo iyo banaanbaxyo ka dhacay magaalooyinka Ereteriya ee looga soo horjeedo Dowladda;
6. Siinta tababar millatari (gudaha Suudaan) kooxda ‘Ikhwaanul Muslimiinka’ xubnaha mucaaradka ee abuuritaanka miinooyinka, weerarada gaadmada ah iyo dilalka saraakiisha sare ee dowladda; si loo fududeeyo dhexgalka gudaha Eritrea si ay u fuliyaan howlahan;
7. In la dilo hoggaamiyeyaasha awoodda leh ee Ereteriya;
8. Inay ku kacaan falalka carqaladaynta dhaqaalaha ee Ereteriya;
9. In la xoojiyo dacaayadda cadaawada ah;
10. In la shaaciyo xadgudubka xuquuqda aadanaha ee ka jira dalka Ereteriya ururada caalamiga ah iyo dalal shisheeye; si aad ugu faafiso dukumiintiyada iyo fiidiyowyadaas natiijadaas.
Warbixintan oo lagu qoray bogga wasaaradda warfaafinta dowladda Eriteriya aya si toos ah waxay Eriteriya ugu eedeyneysaa dalka Qatar in uu abaabulayo falal argagixiso oo la mid ah midka ay hadda ka wadaan Soomaaliya.